Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday : Tsy hanaiky intsony ireo depiote
Inty sy Nday : Tsy hanaiky intsony ireo depiote
Mbola misy iray volana mahery eo vao hanomboka ny fivoriana ara-potoana faharoan’ny Parlemanta. Efa mifampiresadresaka sahady anefa ny sasantsasany amin’ireo depiote satria mahatsiaro ho tompon’andraikitra amin’ny raharaham-pirenena koa izy ireo. Miankina amin’ny fahavitan’ny governemanta ny asany ny ho avin’ny maro amin’ireo depiote satria ny betsaka amin’ireo depiote mandrafitra ny Antenimierampirenena dia nivoaka avy amin’ny Vondron-kery misy ny fahefana mpanatanteraka (IRD).
Eo anoloan’ny endriky ny firafitry ny governemanta ankehitriny, ary indrindra eo anatrehan’ny tsy mbola fahitana vokatra mivaingana tena maharesy lahatra momba ny fikarakarana ny vahoaka dia mahatsapa ny depiote fa tsy azo ametrahana fanantenana sy fitokisana ny governemanta.
Tsy ny vahoaka amin’ny ankapobeny no faly raha nahazo minisitra ny faritra iray na roa, hoy ny fanazavan’ny depiote iray avy amin’ny IRD fa ampahan’olona vitsy ihany satria manantena tombontsoa manokana avy amin’iny minisitra akaiky azy iny. Tsorina, hoy ity depiote ity fa saika mitovy ny fandraisan’ny vahoaka amin’ny faritra rehetra ny fahitan-dry zareo ny governemanta ankehitriny. Tsy manome tsiny ny filohampirenena tamin’ny fanendrena azy ireny izahay, hoy ny depiote iray hafa, avy amin’ny “tsy miankina” satria natolotra azy ny lisitra ary misy olona tsy fantatry ny filoha akory amin’izy ireo, saingy izay herinandro vitsivitsy nanendrena azy ireo izay dia nahafahana nitaratra fa tsy hanao raha ny sasany amin’izy ireo.
Ny Depiote iray avy amin’iny faritra Atsimo Andrefana iny moa dia nanamarika fa “ny tetikasan’ny filohampirenena amin’ny alalan’ny fanamboarana fotodrafitrasa no hita taratra fa ny fikarakarana ny sosialy sy ny fanarenana haingana ny toekarena dia tsy hita firy”. Ilaina ny lalana fa tsy ampy hiteraka vokatra ho amin’ny fampiroboroboana ny toekarena, hoy izy.
Renim-pianakaviana iray sady solombava avy amin’iny faritra atsinanana iny kosa no nanipika fa “basy atifi-kavana ny anay, tsy afenina fa arangaranga, ka mampiomana ny governemanta izahay fa raha vao manomboka io fivoriana ara-potoana faharoa eo aminay ao amin’ny Antenimierampirenena io dia hiroso amin’ny latsabato fitsipaham-pitokisana ny governemanta izahay satria tsy zakanay intsony ny akon’ny fitakian’ny vahoaka any amin’ny faritra nifidy anay momba ny fikarakarana ny vahoaka amin’ny ankapobeny.” Samy ahenoana izany fitarainana sy fitakiana izany ny faritra maro ka efa maro ny depiote nifanaiky fa tsy hisintaka intsony satria governemanta hanimba ny ho avin’ny vahoaka no misy.
Mifanandrify mihitsy amin’ny matoandahatsoratra nataonay teto omaly moa ny akon’ny feon’ny depiote tafaresaka taminay omaly teny Tsimbazaza. Izahay teto dia nilaza omaly fa “tsy niteraka fitoniana ara-piaraha-monina ny fanovana ny minisitra maro”. Ireo depiote omaly dia nanipika fa “hiroso amin’ny latsa-bato fitsipaham-pitokisana amin’io fivoriana ho avy io satria matin’ny vavam-bahoaka ry zareo”. Angamba kosa tsy ho fivoriana hampitain-davitra intsony no hisy amin’io ho avy io satria efa natsahatra ny hamehana ara-pahasalamana.